Sawirro: Al-Shabab oo baahiyay sawirro muujinaya weerarkii cuslaa ee Bariire. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Sawirro: Al-Shabab oo baahiyay sawirro muujinaya weerarkii cuslaa ee Bariire.
On Apr 5, 2021 2,610 0
Warbaahinta Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa internetka ku baahiyay sawirro muujinaya sida uu u dhacay weerarkii cuslaa ee dhawaan ciidamo katirsan Mujaahidiinta ay ku qaadeen saldhiga ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Sawirrada ayaa muujinaya ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab oo dagaal culus la galay askarta Dowladda federaalka ee ku sugnaa deegaanka Bariire, halkaas oo ugu dambeyn ay Mujaahidiintu la wareegeen.
Ciidamada Mujaahidiinta ayaa sidoo kale la arkayaa iyagoo tooganaya askar katirsan ciidamada Dowladda federaalka, kuwaas oo lagu kediyay weerarka.
Waxaa sawirrada la socday bayaan kasoo baxay maktabka Warfaafinta ee Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab, kaas oo looga hadlay sida uu u dhacay weerarka, laguna bogaadiyay raggii ka qeybgalay weerarkaas.